सिंहदरबार महिला मार्च : ए हजुर एउटा प्रश्न सोध्न पाइन्छ, हामीलाई स्वास फेर्न कसको अनुमति चाहिन्छ ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
सिंहदरबार महिला मार्च : ए हजुर एउटा प्रश्न सोध्न पाइन्छ, हामीलाई स्वास फेर्न कसको अनुमति चाहिन्छ ?
३० माघ २०७७ १ मिनेट पाठ
महिला हिंसा लगायतका घटनाको विरोध गर्दै सिंहदरबार महिला मार्च भएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनको अगुवाईमा महिला मार्च भएको हो। बसन्तपुरबाट मार्च सुरु भएको छ। कालो कपडा लगाएर महिलाहरु मार्चमा सहभागि भएका छन्। उनीहरुले बलात्कार खुलेआम बलात्कृत गुमनाम, ए हजुर एउटा प्रश्न सोध्न पाइन्छ, हामीलाई स्वास फेर्न कसको अनुमति चाहिन्छ ? जस्ता नारा लगाएका छन्।
प्रकाशित: ३० माघ २०७७ १४:५१ शुक्रबार
महिला हिंसा महिला मार्च